I-China AI Germ-killing Robots AIStrike Ukukhiqiza neFektri | Doneax
Iselula yokushaya ngamandla i-ultraviolet sterilizer
(Intelligent pulsed light disinfection robot) AIStrike imingcele yezobuchwepheshe
1) Sebenzisa izindlela zomzimba ukubulala amagciwane.
2) Pulse xenon isibani, elikhanyayo ubude arc ≥370 mm, elikhanyayo imvamisa 2 Hz, uhlelo kuthola ngokuzenzakalela isibani
Impilo ye-Tube, sebenzisa imingcele.
I-3) Inani lokushaja nokukhishwa kwe-high-voltage discharge capacitor izikhathi ezingama- ≥50, futhi uhlelo luthola ngokuzenzakalela isimo se-capacitor yokukhipha futhi lukhumbuza ukufaka esikhundleni se-capacitor esiphelelwe yisikhathi.
4) Ukushaja inqwaba okokufaka kwamandla: 220V / 50HZ, amandla okukhipha: 48V15A.
5) Inzalo factor, egcwele wavelength ishayela ukukhanya okubandayo 200-1100nm kuhlanganise 200nm-315nm
I-wave band i-ultraviolet, i-pulsed ultraviolet ngobude be-250nm-280nm (kumitha elilodwa) amandla ≥60000uw / ​​cm2.
6) Izinga lokubulala le-Acinetobacter baumannii AB-CR ngemuva kwemizuzu engu-5 ye-irradiation ingu- ≥99.9%,
Ngemuva kwemizuzu engu-5 yemisebe, izinga lokubulala lamaCandida albicans lingu- ≥99.9%,
7) Izinga lokubulala lika-MRSA ≥99.9% ngemuva kokuchayeka kubuchwepheshe obufanayo nochungechunge olufanayo lwemikhiqizo imizuzu emi-5 (amamitha ama-3)
Izinga lokubulala likaPseudomonas aeruginosa ngemuva kwemizuzu engu-5 ye-irradiation (kumamitha amathathu) ngu- ≥99.9%.
8) Izinga lokubulala likaKlebsiella pneumoniae ≥99.9% ngemuva kokuchayeka kubuchwepheshe obufanayo kanye nochungechunge olufanayo lwemikhiqizo imizuzu emi-5 (kumamitha amathathu),
Izinga lokubulawa kwe-Acinetobacter baumannii ≥99.9% ngemuva kwemisebe imizuzu emihlanu (kumamitha amathathu),
Izinga lokubulala lamagciwane wemvelo ngemuva kwemizuzu emi-5 ye-irradiation (kumamitha ama-3) ngu- ≥99.7%.
9) Isikhathi sokubulala amagciwane singasethwa sibe imizuzu engu-5 kuya kwengu-10, irediyasi yokubulala amagciwane ingekho ngaphansi kwamamitha ama-3, futhi umsebenzi wokubala amagciwane ungasethwa ngosayizi wento yokubulala amagciwane negumbi; isikhathi sokubala phansi singasethwa futhi sibonakale;
I-10) Ishubhu lesibani liphakanyiswa ngokuzenzakalela futhi lehliswe, futhi ukushaywa okuphakamisa akuyona ngaphansi kwe-50CM. Ithubhu yengilazi ye-quartz engeniswa kakhulu ephezulu isetshenziselwa ukubulala amagciwane okuphezulu kakhulu nokuvalwa inzalo. Okuphezulu kufakwe inetha lokubola lokuhlunga le-ozone ukubola nokuhlunga i-ozone.
I-11) Isibuko se-aluminium esingenisiwe esisetshenzisiwe sakha indawo ebonakalayo egobile. Ukubukeka kwesibuko se-aluminium engaphezulu yi-≥90%, okwandisa amandla okukhanya okukhishwa ngaphandle.
12) Uhlelo lukulungele ukusetshenziswa. Ngemuva komsebenzi, ukuhlushwa kwe-ozone kungu-.10.1mg / m³ (kunikezwa umbiko wokuhlola), futhi akukho monakalo emvelweni njengemishini, upulasitiki wensimbi, amawindi odonga, amakhethini, njll.
I-13) 7-intshi smart capacitive touch screen, isoftware yesikrini sokuthinta inemisebenzi yesikhumbuzo sokuqeda ukubulala amagciwane, ukuphakamisa isibani, ukwehlisa isibani, ukuqala ukukhanya, ukumisa ukukhanya, ukulungiselelwa kohlelo, ukusethwa kwepharamitha nezinye izinkinobho zomsebenzi. Umsebenzi wokuphatha okhaliphile, ukulandelela okuzenzakalelayo kwenqubo yokubulala amagciwane, ukurekhoda okuzenzakalelayo kwemininingwane efanele ye-disinfection ngayinye, uhlelo luqoqa ngokuzenzakalela idatha yemodyuli ngayinye yohlelo, futhi ine-alamu esebenza nge-othomathikhi. Irimothi yethebhulethi engenantambo inemisebenzi efanayo neyesikrini esiyinhloko sokuthinta.
14) Inemisebenzi yokuskena ngokuzenzakalela nokugcina imephu, ukuzulazula okuzenzakalelayo, ukushaja okuzenzakalelayo, ukugwema izithiyo okuzenzakalelayo, i-alamu ezenzekelayo neminye imisebenzi, ngaphandle kokungenelela okwenziwa ngesandla, ukubulala amagciwane okuzenzakalelayo.
15) Usebenzisa imojula yokuskena ye-laser, imojuli yekhamera ye-3D kanye ne-radar ye-ultrasonic, ukugwema okuzithiyo okuzenzakalelayo nokuzula okuzenzakalelayo.
14) Nge-interface ehlakaniphile, ungafinyelela kalula isoftware ehlakaniphile yokuphatha ifu ukubona ukuqapha kwesimo somshini, ukuqoshwa kwedatha, umbuzo, ukulandelela neminye imisebenzi.
15) Umkhiqizi udlulise isitifiketi se-SIO9001, umkhiqizo ofanayo wobuchwepheshe udlulile isitifiketi se-CE, umkhiqizo ofanayo wobuchwepheshe unombiko wosesho olusha, futhi umkhiqizo ofanayo wobuchwepheshe unesitifiketi se-patent.
16) Umkhiqizo ofanayo wezobuchwepheshe uhlinzeka ngohlu lwabasebenzisi bezibhedlela zasekhaya eziyi-10 ngaphezu kweBanga A.
Thayipha Izixhobo ze-Ultrasonic Sterilization
Inombolo yemodeli I-AIStrike
Umbala Isiliva grey
Isikhathi sokubulala amagciwane 5-10Amaminithi
Luminous arc ubude ≥370mm
Indawo engabulala amagciwane hhayi ngaphansi kwamamitha amathathu
Ukushaywa unhlangothi kwesibani hhayi ngaphansi kuka-50CM
Ukuhlushwa kwe-ozone ngemuva komsebenzi ≤0.1mg / cubic meter
smart capacitive Isikrini 7 intshi
Impilo yamalambu Izikhathi ezingama-4 million
Isisindo sengqikithi 115kg
1) Ukuhamba okuzenzakalelayo: Ngohlelo oluphelele lokugcina, ngemuva kokuthi indawo yokubulala amagciwane isethiwe, imishini ifika lapho iya khona ngokuzimela;
2) Ukugwema isithiyo okuzenzakalelayo: Lapho uhlangabezana nesithiyo, okokusebenza kuzokugwema kukodwa, kuhlele umzila omusha, bese ufika endaweni yokubulala amagciwane;
3) Ukushaja okuzenzakalelayo: Uma ibhethri linganele, idivaysi izobuyela ngokuzenzakalela kunqwaba yokushaja ekhethiwe yokushaja;
4) Ukubulala amagciwane okukhaliphile: Faka isigceme sokubulala amagciwane ngokwendlela ehleliwe, futhi abasebenzi bezokwelapha akudingeki bangene ewadini ngqo, ngokugwema ukutheleleka okuthe ngqo.
Amarobhothi abulala i-AI Pulsed Light Germ
1) Isikhathi esifushane sokubulala amagciwane: imizuzu emihlanu yesikhathi sokubulala amagciwane, amawadi amaningi angabulawa amagciwane nsuku zonke;
2) Ububanzi benzalo ebanzi: indawo yokuvala inzalo ingafinyelela ku-3m, ukukhanya okukhonjisiwe nokugxila kokuhlunga kungakhanyisa ngqo indawo yokuxhumana enemvamisa ephezulu, futhi kuhlanzwe ngesandla izindawo ezinganakwa kalula, ezingasusa amagciwane ngokuqondakala nangokuphumelelayo;
3) Ukuvala inzalo okuphelele: i-full-band pulsed ultraviolet (200-315nm) kanye ne-full-spectrum disinfection kanye nobuchwepheshe bokubulala inzalo kungabulala amagciwane namagciwane amelana nemithi;
4) Ukusebenza okulula: uhlelo lokulawulwa kwesoftware ehlakaniphile, olulungele ukusetshenziswa;
5) Ukuvikelwa kwemvelo nokuhlala isikhathi eside: akukho monakalo nokubulala amagciwane, akukho zinsalela zamakhemikhali, azikho izinsalela eziyingozi.
Isibani seXenon 1 ucezu
Izibuko ezilwa ne-UV 2 ngazimbili
I-PC yethebhulethi 1piece
Isoftware eyisisekelo yeRobot 1 isethi ifakiwe kuwo wonke umshini
Ukushaja inqwaba 1 isethi
Intambo yamandla 1piece
Isikulufava sePhillips 1piece
Olandelayo: Amarobhothi aBulala amaSelula we-Germ PulseIn-D